China Die kukanda kuumbwa Mugadziri uye mutengesi | Mestech
Die vachikanda muforomamhando midziyo simbi ikafa Kudzingwa. Chifa chinokanda chakuvhe chine chakuvhe "chifukidzo kufa hafu" uye imwe iyo "ejector kufa hafu.
Die-vachikanda anoumba anonyanya anoshandiswa pakuumba asiri-ferrous simbi zvikamu zvine yakaoma mamiriro uye chimiro. Zvakadai sekugadzirwa kwakawanda kwealuminium alloy, zinc alloy, magnesium alloy uye mhangura alloy zvikamu, izvo zvinonyanya kushandiswa mumotokari, zvemagetsi, zvemagetsi zvigadzirwa, fenicha, zvekurapa nezvimwe zvigadzirwa.
Chii kufa vachikanda muforoma
Kufa kukanda izita pfupi rekumanikidza kukanda. Iyo nzira yekuzadza mhango yefa yekukanda muforoma nemvura kana semi simbi yemvura pasi pekumanikidza kukuru
kumhanya kwakanyanya uye simbisa nekukurumidza kuti uwane kukanda. Iforoma inoshandiswa inonzi kufa kukanda kufa muforoma.
Mhando kufa vachikanda anoumba
Sekureva kwekushandisa, inogona kuve yakakamurwa kuita zvikamu uye zvikamu zvekushongedza.
Zvinoenderana nemamiriro ekushandisa, inogona kukamurwa kuita mota kufa kufa ichikanda muforoma, 3C chigadzirwa kufa kufa vachikanda muforoma, toy kufa kufa kukanda chakuvhuvhu, nezvimwewo.
Zvinoenderana nehunhu hwechimiro uye ukobvu hwemadziro, inogona zvakare kukamurwa kuita mutete-yakakomberedzwa kufa-kukanda muforoma, bhokisi kufa-kukanda chakuvhuvhu uye disc kufa-ichikanda muforoma.
Die vachikanda muchina, kufa-vachikanda chiwanikwa uye kufa-vachikanda vanofa zvinhu zvitatu zvekufa-vachikanda kugadzirwa, chimwe chazvo chakakosha.
Mhando yekufa-yekukanda muchina, kufa zvimiro zveparamende, kufa-kukanda maitiro uye fekitori dhizaini kunoenderana neakafa-vachikanda chiwanikwa zvinhu, saka kupatsanura kwekufa-kukanda kufa maererano nechinhu chesimbi chinhu chakanyanya kukodzera kugadzirwa tsika. vari kufa-vachikanda muforoma inogona kukamurwa aruminiyamu chiwanikwa kufa-vachikanda muforoma, zinc chiwanikwa kufa-vachikanda muforoma, magnesium chiwanikwa kufa-vachikanda muforoma uye mhangura chiwanikwa kufa-kukanda chakuvhuvhu. Mashoko acho anotevera:
1) .Aluminium ikafa ichikanda muforoma
2) .Zinc kufa vachikanda muforoma
3) .Magnesium chiwanikwa kufa-vachikanda muforoma
4) .Copper chiwanikwa kufa-vachikanda muforoma
5) .Sintering muforoma
Aluminium ikafa ichikanda muforoma
Zingi kufa vachikanda muforoma
Die vachikanda muforoma sezvamunoita
Iko kuumbwa kwekufa kwekukanda muforoma kunogona kuve kwakakamurwa kuita zvikamu zviviri:
Mira muforoma hafu:Kugadziriswa pane yakagadziriswa muforoma yekumhanyisa ndiro yemuchina wekufa uchikanda muchina, ine sprue yakabatana nemuromo kana kamuri yekumanikidza;
Chinjwa muforoma hafu:Kuti igadziriswe pane inokwira ndiro yemufa-yekukanda muchina, uye ndokufamba neiyo inokwira ndiro yekuvhura nekuvhara iyo mold. Kana uchivhara chakuvhuvhu, iyo mhango mhango uye iyo yekukanda sisitimu inogadzirwa, uye iyo simbi yemvura inozadza iyo mhango mhango pasi pekumanikidza kukuru. Kana uchivhura muforoma, iyo inofambiswa muforoma hafu uye yakamira muforoma kumisa zvakaparadzaniswa, uye kuraswa kunosundirwa kunze nerubatsiro rweejection mashandiro akaiswa pane chinofambiswa muforoma hafu.
Iyo yekufa-yekurasa die chimiro inosanganisira anotevera madiki-masisitimu maererano nemabasa ayo:
1) Mhango: pamusoro pekunze (ruoko rweshure); Core: suwo remukati repamusoro mukati.
2) Nongedzo zvikamu: gwara post; tungamira sleeve.
3) Vhura mashini Push tsvimbo (thimble), isa patsva tsvimbo, pusha tsvimbo yekugadzirisa ndiro, pusha ndiro, pusha ndiro ndiro giya, pusha ndiro giya ruoko.
4) Rutivi rwepakati kudhonza mashandiro Boss, gomba (padivi), wedge block, muganho chitubu, sikuruu.
5) Kufashukira system Kufashukira muchimwiro, pedza panzira.
6) Kutsigira zvikamu.
Chakamira muforoma base ndiro, inotakurika muforoma base ndiro, pamutsago chinogumbura (gungano, Positioning, kuisa basa).
Musiyano pakati ufe vachikanda muforoma uye mapurasitiki muforoma:
1. Iyo jekiseni kumanikidzwa kwefa kufa kukanda kufa yakakura. Naizvozvo, iyo template inofanirwa kunge iri gobvu. Kudzivirira kushanduka.
2. Gedhi rekufa kukanda chakuvhe rakasiyana neiro rejekiseni. Kudzvinyirira kwakanyanya kwezvinhu zvinoyerera kuti zvionekwe neyekutsemura koni.
3. Musimboti wekufa uchikanda kufa haudi kuomeswa. Nekuti tembiricha iri mufa mhango inopfuura 700 ℃. Naizvozvo, kuumbwa kwega kwega kwakaenzana nekudzima kumwe. Iyo mhango ichawedzera kuoma uye kuoma. Iyo yakajairika jekiseni muforoma inofanira kudzimwa kumusoro hrc52.
4. Kazhinji, iyo mhango yekufa-kukanda kufa inoda nitriding kurapwa. Kudzivirira iyo alloy kubva kunamatira kune iyo mhango mhango.
5. Kazhinji, ngura yefa yekukanda kufa inove yakakura. Iyo yekunze nzvimbo inowanzo kuve bhuruu.
6. Kuenzaniswa nejekiseni muforoma. Kukodzera clearance chinofamba chikamu anofa vachikanda vanofa (akadai chinoumba kudhonza mubato) inofanira kuva hombe. Nekuti tembiricha yakakwira yefa yekukanda maitiro inokonzeresa kupisa. Kana iyo clearance iri diki kwazvo, iyo fomu ichave yakanamatira.
7. Nzvimbo yekuparadzanisa kufa-yekukanda kufa ine yepamusoro inowirirana zvinodiwa. Nekuti iyo fluidity yealloy iri nani kwazvo kupfuura yepurasitiki, zvine njodzi zvakanyanya kune yakanyanya tembiricha uye yakanyanya kumanikidza zvinhu kuyerera kubhururuka kunze kwekuparadzanisa pamusoro.
8. Jekiseni muforoma kazhinji inotsamira pane thimble. Nzvimbo yekuparadzanisa inogona kuvharwa. Iyo yekufa-ichikanda muforoma inofanirwa kupihwa chiutsi chihuri uye slag yekunhonga bhegi (kutora iyo inotonhora zvinhu musoro).
9. Kuumba hazvienderani. Jekiseni kumhanya kufa vachikanda kuumbwa inokurumidza. Chekutanga danho jekiseni kumanikidza. Plastic muforoma inowanzo kuve yakakamurwa kuita dzinoverengeka jekiseni, kumanikidza.
10. Iyo yekufa-yekukanda muforoma maviri mahwendefa muforoma (ini handina kuona matatu ndiro kufa-ichikanda muforoma parizvino) kumwe kuvhura. Vakasiyana zvigadzirwa zvivakwa zvepurasitiki kuumbwa zvakasiyana. 3 ndiro yevhu yakajairika. Nhamba uye kuteedzana kwekuvhura kunoenderana neyakafa dhizaini. Square thimble haiwanzo kushandiswa kufa vachikanda muforoma. Cylinder.
11. Yakarerekera pini (yakanyanya tembiricha uye yakanaka mhinduro fluidity) iri nyore jam, inotungamira mukusagadzikana kugadzirwa kweforoma. Uye zvakare, epurasitiki muforoma uye kufa-vachikanda muforoma zvinoitwa zvakasiyana simbi; epurasitiki muforoma kazhinji anoshandisa 45 × simbi, T8, T10 uye dzimwe simbi, apo kufa-Kudzingwa
Mestech kambani inotarisa kumunda weiyo chaiyo mold yekugadzira uye zvikamu zvekugadzira kweanopfuura makore gumi, neepamberi indasitiri tekinoroji uye yakapfuma muforoma yekugadzira ruzivo. Zvigadzirwa zvekambani izvi zvinonyanya epurasitiki zvigadzirwa kana zvigadzirwa zvegobvu zvakadai semagetsi zvigadzirwa zvemagetsi, zvigadzirwa zvekurapa, zvigadzirwa zvevacheche, nezvimwewo, pamwe nezvigadzirwa zvepurasitiki zvakadai seyemumba zvigadzirwa uye auto zvikamu. Iyo kambani ine simba rakasimba rezvivakwa dhizaini uye chakuumbwa dhizaini, iyo inogona kupa vatengi nemazano akawedzera optimized pane chigadzirwa chimiro uye zvinonzwisisika zvirongwa zveforoma
Pashure: Maitiro ekugadzira epurasitiki zvikamu
Zvadaro: Plastic jekiseni anoumba